Mongoliana Mpifindrafindra-monina Niala Fiompiana, Ary Niditra Tamin’ny Setroka · Global Voices teny Malagasy
Mpifindrafindra-monina Mongoliana Niala Ny Fiompiana, Ary Niditra Tamin'ny Setroka
Voadika ny 10 Aogositra 2017 4:27 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, čeština , Português, Italiano, Français, Español, English
Ity tantara avy amin'i Anne Bailey ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 10 Jolay 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny PRI sy Global Voices.
“Olana lehibe ny main-tany”, hoy i Batjargal Zamba, mpamantatra toetrandro sy mpanolotsaina ao amin'ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana ao Mongolia. “Ary noho ny fiakaran'ny maripànan'ny tany, hihitatra ny faritra karankaina ao Mongolia.”
Mahafantatra ireo mpikatroka ao an-toerana tahaka an'i Chuluunbaatar fa tsy misy zavatra betsaka azon'izy ireo atao mba hamahana ireo olana lehibe ireo, saingy manosika hatrany ho amin'ny fiovana izy ireo. Anisany ao anatin'ny tetikasam-piarahamonina mandrakitra an-tsarintany ny fepetra ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ao amin'ny distrikan'ny trano lay ao an-tanàna i Chuluunbaatar – mandrakitra ny zava-drehetra avy amin'ny halavirana tsy dia lavitra, tahaka ny famatsiana rano, ny toerana fanariam-pako tsy ara-dalàna ary ny fahalotoan'ny rivotra. Ny tanjona dia ny fampiasana tahiry hanampiana ny hetsika fanohanana ny asa.